Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
China, Gunyana 17, 2020
musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Mabhirionari Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kukura Kwevana Nostalgia Editors
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Billionaire ine zita rezita "Oracle yaOmaha". Our Warren Buffett Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wevatori vemabhizimisi vanobudirira zvikuru munyika. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezvehupenyu hweWarren Buffett iyo inofadza chaizvo. Iye zvino, tisingabatsirizve, ngatitangei.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Warren Edward Buffett akaberekwa musi we30th weAugust 1930 kuOmaha, kuNebraska, USA Aiva wechipiri pavana vatatu vakazvarwa naamai vake, Leila Buffett uye kuna baba vake, Howard Buffett.
Warren Buffett semwana. Credits: upenyu.
Iyo nyika yeAmerica yeVhite rudzi rwechiScandinavia neAmerica midzi yakabva mumhuri yakapfuma uye yakasimudzirwa mumusha wekuOmaha, Nebraska. Kukura kuNebraska pamwe nehanzvadzi yake yakakura, Doris Buffett nemukoma wake muduku, Roberta, wechiduku Buffett aifarira Bhizinesi kubva padiki.
Wechiduku Warren Buffett nehanzvadzi dzake Doris naRoberta. Credits: nguva.
Buffett akanga akwegura kare 6 paakatenga 6-packs yeCoca-Cola zvinyoro zvekutengesa purofiti. Panguva iyo Buffett akanga akwegura 11, akaita chikwata chake chekutanga mukutsvaga zvikamu zvitatu zveCities Service pa $ 38 per share.
Warren Buffett akaita chikwata chake chekutanga paakanga akwegura 11. Credits: RR.
Iko Stock yakawira nguva refu mushure mokunge atenga kutenga. Kutya, Buffett akachengetwa kune zvikamu zvake kusvikira awedzera ku $ 40. Akasunungurwa nechekare, Buffett akakurumidza kutengesa zvikamu zvake, kukanganisa aizozozvidemba apo Cities Service yakakwira kusvika ku $ 200. Nokudaro, Buffett akadzidza kushivirira inokosha mukugadzira nokuchengeta mari, chidzidzo chinogona kumutungamirira pakuita maitiro anotevera.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yeBuffett inosanganisira zvidzidzo zvake pa Rose Hill Elementary School. Paaiva kuchikoro Buffett pamwe pamwe nevadzidzisi uye vachitengesa gums uye soda. Bhizinesi rebhizimisi rakanga richiri kudzidza kuchikoro apo baba vake Howard vakasarudzwa muUnited States Congress. Somugumisiro, mhuri yose yakatamira kuWashington, DC uko Buffett akapedza dzidzo yake yepamusoro paAlice Deal Junior High School.
Akazoenda kuWatchrow Wilson High School apo akabatanidza zvidzidzo nekugadzira nzira itsva dzekuita mari. Mukushambadzira kwake kukuru panguva iyoyo kwaiva kubatana neshamwari yekutenga mushandisi wepinball wakashandiswa we $ 25. Imichina yakagadzirirwa pane imwe nzvimbo yakabhadharwa yakabhadhara zvikwereti zvakagonesa Buffett neshamwari yake kutenga nekuisa mamwe mishonga munzvimbo dzakasiyana. Buffett akazotengesa bhizimisi ye $ 1,000 asati apedza chikoro chesekondari mu1947.
Warren Buffett akapedza chikoro chesekondari mu1947. Credits: Collectors.
Paakapedza chikoro cheSchool High mu1947, Buffett akanga asina vavariro yekuenda kuchikoro. Uyu ndiye-wechidiki uyo akanga atova akachengetedza $ 5,000 kubva mukuendesa mapepanhau aida kuva mubhizimisi wenguva yakazara. Baba vake, zvisinei, vakamukurudzira kuenda kukireji kutanga neWharton Business School paYunivhesiti yePennsylvania. Buffett akadzidza pachikoro kwemakore maviri asati awana kuendesa kuYunivhesiti yeNebraska kwaakapedza kudzidza neBachelor of Science degree muBusiness Administration.
Warren Buffett akawana digiri yake yekutanga kubva kuYunivhesiti yeNebraska. Credits: University of Nebraska.
Kwapedza zvidzidzo zvekudzidza akaona Buffett yakarambwa neHarvard Business School pamusana pekuti akanga achiri muduku. Nokudaro, akanyora kuColumbia Business School yeKunivhesiti iyo yaive neropafadzo yekuenda kumakoro akataurwa nomudzidzisi wake, Benjamin Graham, "baba vekukosha kwekuita mari." Akapedza chikoro kubva kuchikoro mu1951 uye akapfuurira kugumisa kuda kwake nokuda kwezivo kuNew York Institute of Finance.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Zvine ruzivo rwakakwana mune zvebhizimisi nekubhadhara Buffett akasarudza kusimira kwenguva pfupi kuisa zvikwereti zvake. Iye panzvimbo pacho akashanda semutengesi wekutengesa kune baba vake, Buffett-Falk & Co pakati pe1951-1954. Kunyange zvazvo achiri muduku zvikuru, Buffett akazviona sezwi rinonzwika nekupa mazano ekutsvaga mari ayo akabudiswa zuva rega rega.
Chinyorwa cheWarren Buffett chikamu chezano pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga kwakabudiswa zuva rega rega mu1951. Credits: Business Insider
Jobho wake wakatevera aiva neubambani hwaBenjamin Graham apo akashanda kusvikira Benjamin Graham achirasikirwa uye akapedza kubatana mu1956. Panguva yekuvhara, Buffett akanga atoita mari yakawanda uye akatanga ushamwari hwake hwakanzi Buffett Partnership Ltd.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Buffett akaenderera mberi achiita humwe humwe hukama uye akazova mamiriyoni mu1962 nekuda kwezvaakawana kubva kumabatanidzwa ake akasiyana. Panguva imwecheteyo, Buffett akazotenga zvigaro pamatombo ekugadzira michina - Berkshire Hathaway kusvikira asvika gurukota guru rekusimbisa uye akazogadzirisa.
Bhizimusi rebhizimisi rakabatanidza hukama hwakasiyana-siyana kuti huve pasi peBerkshire Hathaway. Zvishoma nezvishoma akawedzera hukama hweBerkshire Hathaway uye akazoita kuti iAmerica nyika dzakasiyana-siyana dzive nekambani.
Warren Buffett akavandudza Berkshire Hathaway kubva kune imwe nguva nguva yekutengesa michina kusvika kune dzimwe nyika dzakasangana nekambani. Credits: OWH uye NNH.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Buffett akanga asingazivikanwi kusvikira 1986 paakaita bhiriyoni rake rokutanga uye akatungamirira Berkshire Hathaway kutenga chikwata che 12% mukambani yakashata, Salomon Inc. Berkshire Hathaway akava sangano guru reSomonomon Inc naBuffett vari kushanda semutungamiriri uye sachigaro wezvitsva zvitsva .
Makore maviri gare gare, Buffett akatanga kutenga mashizha muCoca-Cola Company uye pakupedzisira akapiwa 7% yekambani. Imari inosungirirwa kusvika nhasi ndiyo imwe yekutengeserana kweBerkshire kunonyanya kukosha. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Buffett's 7% pachake weCoca-Cola ndeimwe yekutengeserana kweBerkshire kunonyanya kukosha. Credits: Business Insider uye eBay.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Warren Buffett akaroora kaviri. Tinokuudzai nezvekufambidzana naye, nhoroondo yemhuri uye yehukama hwemhuri. Kutanga, Buffett haazivikanwe kuti akambotaura nemukadzi chero upi zvake asati asangana nemukadzi wake wokutanga Susan Thompson.
Buffett naSusan vakaziviswa kune mumwe nemukoma wake muduku, Roberta. Vose vakaroorana vakaroorana kwemwedzi vasati varoora mu1952 paDhedee Presbyterian Church muOmaha.
Warren Buffett Wedding Photo. Credits: Pinterest.
Muchato wavo wakakomborerwa nevana vatatu vanosanganisira:
1. Susan Buffett (akazvarwa muna 1953). Susan anoshanda semupiroti uye anoshumira seachigaro weSherwood Foundation.
Warren Buffets mwanasikana Susan Buffett. Credits: Business Insider
2. Howard Buffett (akaberekwa muna December 1954). Howard ibhizinesi, murimhi, philanthropist uye aimbova wezvematongerwo enyika.
Mwana wekutanga weWarren Buffet Howard Buffett. Credits: TFCP.
3. Peter Buffett akaberekwa muna May 1958. Peter ndiye nhengo yepamhizha yemhuri uye muimbi weEmmy Mubayiro. Naiye munyori, munyori uye mutsigiri.
Mwana wechipiri weWarren Buffett, Peter Buffett. Credits: Popsugar.
Susan naBuffett vakaparadzaniswa muC1977 mushure mekunge avo vambosiya murume wake wemabhiriyoni ane tariro yekutsvaga basa rokuimba muSan Francisco. Kunyange zvazvo Buffett akatsigira chisarudzo chake, akazvidemba pamusoro pazvo. Doo akagara akaswedera uye haana kumboroorwa kusvikira Susan afa mu 2004.
Makore maviri mushure mekufa kwaSusan, Buffett akaroorwa nemurume wake kwenguva refu, Astrid Menks. Zvinonakidza kuziva kuti Menks yakaendeswa kuna Buffett nemurume wake waimbova musikana Susan asati amusiya mu1977. Nokudaro, Menks aigara naBuffett kumba kwake muOmaha kwemakore akawanda vasati vatora sangano ravo rehurumende mu2006. Munguva iyi, Hakuna mwana akaberekwa nekubatana kwavo.
Warren Buffett nemudzimai Astrid Menks. Credits: Business Insider
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Warren Buffett akaberekerwa mumhuri ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvebaba vaWarren Buffett: Howard akaberekwa musi we13th yaAugust 1903 baba vaBuffett. Aiva muzvinabhizimisi weAmerica, mutori wehurumende, uye muZimbabwe Republican United Representative yemumiririri wenyika yeNebraska.
Baba vaWarren Buffett baba Howard. Credits: KWN.
Anonzi akakurudzira Bhutett wechidiki kuti aende kukoreji uye awane digiri mune zvidzidzo zvebhizimusi asati ava mubhadharo wenguva yakazara. Akararama kwenguva yakakwana kuti aone Buffett ave mamioneire asati afa muna 1964.
Nezvemai vaWarren Buffett: Leila Stahl ndiye amai vaBuffett uye nhengo isingazivikanwi yemhuri yaBuffett. Amai vakatsigira vakaroorana nemurume wake Howard musi wa 27th waDecember 1925 uye vakabatsira kumutsa Buffett nevanin'ina vake sePresbyterian.
Nezvevana vaWarren Buffett: Buffett ane vana vemhuri mbiri yaakakurira. Vanosanganisira mukoma wake mukuru, Doris Buffett uye hanzvadzi duku, Roberta Buffett. Kusiyana naBuffett, hanzvadzi mbiri idzi hadzina kupinda mubhizimisi asi dzakabatanidzwa zvikuru mukuzvipira.
Warren Buffett hanzvadzi Doris (kuruboshwe) naRoberta. Credits: Daily Mail uye OWH.
Pamusoro pehama dzeWarren Buffett: Buffett baba vanasekuru navanasekuru, Henrietta Duvall Buffett naErnest P. Buffett vaiva vadzidzisi vebhizimisi rinobudirira. Vabereki vamai vake vaiva John Ammon Stahl naStella Frances Barber. Iyewo ane vanun'una vake ainzi Howard Homan Buffett, muzukuru wake anonzi Alex Rozek pamwe chete nevazukuru vakawanda.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chinoita kuti Warren Buffett akanganise? gara shure apo isu tichikuunzira maitiro ehupenyu hwake kuti akubatsire kuwana mifananidzo yake. Kutanga, unhu hwaBuffett hwakakonzerwa neItJ (Introversion (I), Kufunga (S), Kufunga (T), Kutongwa (J)) zviito. Anopindira asi asi zvisinei, anorarama munyika chaiye uko iye anoziva nyaya dzingave dzisinganyanyi kukosha kwaari.
Buffett ndiyewo anofungidzira akazvimiririra anofunga makore mune ramangwana uye anotevera nzira yakasimba yekuzadzisa zvinangwa zvaanozviitira iye pachake. Zvido zvake zvinosanganisira kuverenga, kudzidzira, kutamba ukulele uyewo kutamba bridge mitambo yekuvandudza pakukwanisa kwake kuratidza kushivirira.
Buffett ipfungwa huru yakazvimirira. Credits: Børsen.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Warren Buffett anotarisana pakati pevarume vakapfuma kwazvo munyika yose vane mari yakakwana ye83.6 mabhiriyoni USD. Zvisinei, anorarama hupenyu hunozvininipisa hunomuratidza semunhu anonyanyisa.
Kutanga neBillionaire achiri kugara mumba akawana $ 31,500 kuOmaha, Nebraska. "Ndinofara ikoko," anosimbisa. "Ndaifamba kana ndaifunga kuti ndaizofara pane imwe nzvimbo. Ndingavandudza sei hupenyu hwangu nekuva nedzimba dze 10 kumativi ose enyika? Ndinodziya muchando; Ndiri kupera muzhizha. Zvakanaka kwandiri. " Mishumo inewo zvakare kuti yakashandura muchengeti wemucheka mubhasinet mwana wekutanga paakazvarwa uye akwereta chikwata chekushandisa nemumwe wechipiri.
Warren Buffett imba kuOmaha, Nebraska. Credits: Bornrich.
Muchiedza chakafanana, Buffett haashandisi mumotokari. Akafambisa Volkswagen kwemakore mudzimai wake asati amubatsira kumutsira kumotokari yeLincoln Town. Buffett akanga asinganzwisisiki nehupfumi hwakadaro uye akatengeswa iyo nokuda kwechinangwa cherudo mu2007. Kuwanikwa kwake kwekupedzisira iCadillac XTS yaakatenga mu2014 pamutengo wekutengesa we $ 45,000. Zvinofadza kuti 80 ane makore ane makore makumi maviri nemashanu, asi haana kombiyuta padhesiki rake uye anoshandisa flip foni panzvimbo pefoni.
Warren Buffett akawana Cadillac XTS akapoteredza $ 45,000 mu2014. Credits: CNBC.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Buffett yakawana 94% yehupfumi hwake mushure mokunge asvika munguva ye60. Pane imwe nguva mu2013, Buffett akaita $ 37 mamiriyoni pazuva nekuda kwekusimudzirwa kwekutengeswa kwematengo munguva iyi.
Buffett akawana 94% yehupfumi hwake mushure mokunge apfuura makore gumi nemana 60. Credits: Business Insider uye YouTube.
Anoda ice cream uye anonwa zvakawanda zveCoca-Cola Zvokudya zvekudya. Mukuwedzera, anodya zvakawanda zvezvikwata zvepamate zvakagadzirwa uye anowirirana nesoda.
Buffett akanga ari mu 2012 akabatwa nekenza yeprostate asi akarova chirwere chinopera mwedzi mwedzi uye akagara akaine utano kusvikira zuva.
Akambove ari mutauriri anotyisa wevose kusvikira atora $ 100 Dale Carnegie yekambo pahurukuro yavose. Dzidzo haina kungomubatsira kuti ataure kumudzimai wake asi akaita kuti ave mukuru wehurukuro yavose.
Warren Buffett mutauriri mukuru wevanhu nekuda kwekutungamira Dale Carnegie's course pamusoro pekutaura pachena. Credits: Mako.
Buffett inobatanidzwa zvikuru mukuratidza uye yakagadzirwa The Giving Pledge mu2009 naBill Gates. Ikupa Chipiro inobata mabhiriyoni kuti ape hafu yeupfumi hwavo kune zvikonzero zvinobatsira.
Kunyange zvazvo Buffett akakurira sePresbyterian, haateveri chitendero chero chipi zvacho uye anoratidza seanorist.
Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Warren Buffett Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Childhood Biography Diary- Kwemabhiriyoni evanhu
Jack Dorsey Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Evan Spiegel Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Larry Page Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 9, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 2, 2020
LeBron James Nyaya Yenyaya Yechidiki Plus Untold Biography Facts
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Elon Musk Mwana Wenyaya Nyaya Inosanganisira Untold Biography Facts
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts